Daawo: Madaxweyne Waare ”Hirshabeelle hadaan nahay culeys Amni ayaa na fuula aanan qarsan karin…….. – Walaal24 Newss
September 16, 2019	Off	By walaal24
Madaxweynaha maamul Gobolleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlayay dhacdooyinkii is xig xigay labadii cisho ee la soo dhaafay ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa sheegay Hirshabeelle waqtigan wajaheyso culeys dhanka Amniga ah.
Wuxuu sheegay in xaalada nabad-galyo darro ee ka jirta Hirshabeelle gaar ahaan Shabeellaha dhexe hadda soo gaartay sida uu hadalka u dhigay meel aan la qarsan karin, isaga oo arintan u sababeynaya howlgalada ka socda gobolka Shabeellaha hoose.
”Annaga kama xumin Shabeellaha hoose in cadawga laga saaro, waa dad soomaaliyeed, waa dad walalaheena in cadowga laga dulqaado raaliyaan ka nahay, lakiin cadowgii Shabeelada Hoose lama laaylin wadanka kama bixin, angoo noo soo guuray halkanow nala jogaa, ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Hadalka madaxweyne Waare ayaa imanaya xili i lagu weeraray wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Balcad ciidamo ka tirsan AMISOM iyo mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle.
Madaxweynaha maamul Goboleedka Hirshabelle ayaa maanta u buuxsantay sanadguurada labaad ee ka soo wareegatay markii loo doortay Madaxtinimada dowlad goboleedka Hirshabelle.
Ra’iisul wasaare Khayre oo uga warbixiya Saaxiibada Soomaaliya caawiya safaradii uu ku tagay Gobolada……
Madaxweynaha Puntland oo shir gudoominayay shirka Amniga iyo u diyaar garawga Xuska Aasaaskii Puntland